Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot | Avy amin'ny Linux
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot
Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot nahita ny hazavana andro vitsy lasa izay. Tahaka ny ataontsika isaky ny mamoaka an'ity distro malaza ity dia misy ireto zavatra tokony hataonao aorian'ny fanaovana a fametrahana hatrany am-piandohana.
4 4. Mametraka fitaovana fanampiana hanamboarana Ubuntu
5 5. Mametraha rindranasa famatrarana
6 6. Mametraha mpitantana fonosana sy fikirakirana hafa
7 7. Mitadiava rindranasa misimisy ao amin'ny Ivon-toerana Software Ubuntu
8 8. Manova interface
9 9. Mametraha tondro sy lisitra haingam-pandeha
10 10. Mametraha Compiz Settings Manager & plugins fanampiny fanampiny
11 11. Ny menio manerantany
Azo inoana fa taorian'ny namoahana ny Ubuntu 11.10 dia niseho ireo fanavaozana vaovao ho an'ireo fonosana samihafa izay miaraka amin'ny sary ISO nozarain'i Canonical.
4. Mametraka fitaovana fanampiana hanamboarana Ubuntu
Ny fitaovana malaza indrindra amin'ny fikirakirana ny Ubuntu dia ny Tweak Ubuntu. Ity fahagagana ity dia ahafahanao "mirindra" ny Ubuntu ary mamela azy araka ny itiavanao azy.
5. Mametraha rindranasa famatrarana
6. Mametraha mpitantana fonosana sy fikirakirana hafa
7. Mitadiava rindranasa misimisy ao amin'ny Ivon-toerana Software Ubuntu
chrome, tranonkala fitetezana
8. Manova interface
To Unity 2D - safidy iray amin'ny Unity miorina amin'ny Qt
Unity 2D dia misy ho an'ireo mpampiasa tsy manana fitaovana matanjaka na ireo izay tsy mifanaraka amin'ny 3D ampiasain'ny Unity. Izy io dia maivana kokoa noho ny Unity nentim-paharazana nefa manome ny fampiasa mitovy aminy.
Heverina fa vonona hampiasaina izy ary hiezaka ny hampiasa Unity 2D i Ubuntu raha toa ka tsy mandeha ny solosainao Fanohanana Unity 3D. Na izany aza, raha sanatria ka apetrakao tanana amin'ny antony ...
Ampidiro ny Unity 2D
Raha te hanandrana ny Gnome 3.2 amin'ny Gnome-Shell ianao fa tsy ny Unity.
Raha nanapa-kevitra ny hametraka Gnome Shell ianao dia mety ho liana ihany koa apetraho ny fanitarana Gnome Shell 3.2.
9. Mametraha tondro sy lisitra haingam-pandeha
Misy lisitra feno ny lisitra haingana, miaraka amin'ny famaritana fohy ny fametrahana azy ireo, ao amin'ny Anontanio an'i Ubuntu.
10. Mametraha Compiz Settings Manager & plugins fanampiny fanampiny
11. Ny menio manerantany
Raha tia ny menio manerantany ianao ary tsy tianao izany LibreOffice tsy manohana azy, nanokatra terminal aho ary nanoratra izao manaraka izao:
sudo apt-mahazo mametraka lo-menubar
Tokony hamaha ny olana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot
Mabganua, The Jackal dia hoy izy:
Ny vatanao dia tena vatosoa, ity no tadiaviko, misaotra betsaka ary mirary soa amin'ny fiainana.
Valiny ho an'i Mabganua, The Jackal
Everynicht dia hoy izy:
Nanana olana tsy mitombina amin'ity kinova ity aho, ary izany dia raha vao mametraka flash aho, rehefa miditra amin'ny tambajotra sosialy TUENTI, dia manjavona ny karatra tambajotra, izany hoe tsy very ny signal, fa ny fitaovana kosa tsy misoratra anarana Wi-Fi karatra. na tambajotra ethernet, ary na dia ny fanavaozana aza dia mety hanamaivana ny tsy fahombiazana. Ny zavatra holazaina izay mitranga amiko raha tsy tamin'ny 11.04, tamin'ny teo aloha sy ny fizarana hafa toa an'i Kubutnu 11.10 dia tsy tonga tamiko.
Mamaly an'i Everynicht
Stefania dia hoy izy:
olona manana an'ity kinova ubuntu ity aho ary tsy avelako hisintona zavatra ... afaka misy olona manampy ahy ???
Mamaly an'i stefania
tena mahaliana, mitsidika ihany koa ..
Ny marina dia tsy ho fantatro ny fomba hanampiako anao. Misy manana hevitra ve? Raha ny fahazoako azy dia toa olana amin'ny kernel io fa tsy distro.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny kernel ampiasain'ny Ubuntu dia toa tsy manana an'io mpamily io intsony, izay mahasarika ny saiko.
Na izany na tsy izany dia sarotra amiko ny mino fa tsy manohana an'io mpamily io intsony ny kernel ... na izany aza ... hevitra?
Maxi gonzalez dia hoy izy:
Heveriko fa tsy manana ny mpamily, rehefa mametraka lsmod | grep rt mahazo mpamily maromaro aho fa tsy misy rt2870sta, fa ny sasany kosa dia 11.04 na mint dia hita. Niezaka nametraka tanana aho, saingy mbola nanao salady bebe kokoa ary tsy nahavita na inona na inona haha ​​.. misaotra betsaka tamin'ny valiny
Valiny tamin'i Maxi Gonzalez
Pablobass89 dia hoy izy:
Ry malala, tena mandray anjara betsaka ianao eto ... izao dia te-hanao fangatahana aho. Nametraka ubuntu 11.10 64 bit aho, izay nohavaoziko mivantana avy amin'ny ubuntu 11.04. ny olana dia ... hoe tsy maty ny pc-ko !!! Izaho dia tavela ao amin'ny menio fidirana, izay hametrahanao ny teny miafinao. (azafady noho ny tsy fahitako azy) Te-hanontany fotsiny aho raha azo atao ny mangataka azy na misy olona afaka nanamboatra azy. salama! Paul
Valiny tamin'i Pablobass89
Mba handraisana horonantsary miaraka amin'ny webcam-nao dia manoro anao aho hanandrana Cheese.
Raha manandrana mandrakitra horonantsary miaraka amin'i Empathy ianao dia mety ho olana ao amin'ny Google izany (raha sanatria ka miezaka mampiasa chat Google ianao). Tokony hamboarinao amin'ny fomba manokana hampandehanana azy io ... Mihevitra aho fa nisy fotoana aho nanao lahatsoratra momba io lohahevitra io. Mitadiava "fiaraha-miory" ao amin'ny motera fikarohana blog. Salama! Paul.
Bla bla bla dia hoy izy:
Ity no antony ilazako hoe ity bilaogy ity dia efa ho tsy miandany. Toa torolàlana Windows io.
Valiny tamin'i Blablabla
Ny tsara indrindra dia ny fanesorana ireo angona hapetraka avy eo am-boalohany, ary mazava ho azy fa andramo amin'ny Open Xange na Mageia mba tsy hitranga aminao intsony ireo zavatra ireo
Esory daholo ireo mpamily ary ataovy:
sudo apt-get -y mametraka wifi-radar
Hofoanako ny dia hoy izy:
Salama, mpampiasa Linux vaovao aho, ary toy ny ankamaroan'ny vao manomboka (avy amin'ny zavatra novakiako), dia nisafidy ny hanomboka ny fitsangatsanganana Ubuntu aho. Nametraka 'Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot' aho satria izy no zava-baovao ao anatin'ity distro ity ary hatreto, tena faly amin'izany aho. Nahita ny tutorial-nao aho ary nanampy ahy betsaka ny nanampy zavatra hafa izay tsy tonga tampoka, na izany aza, tsy afaka nametraka ny 'Ubuntu Tweak' aho na dia nanaraka ny torolàlanao momba ilay taratasy aza aho. Izao isaky ny manavao aho dia mahazo ireto manaraka ireto:
W: Tsy afaka mahazo http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu/dists/oneiric/main/source/Sources 404 Tsy hita
W: Tsy afaka mahazo http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu/dists/oneiric/main/binary-i386/Packages 404 Tsy hita
Tena tiako izany raha azonao lazaina amiko ny fomba ahafahako mamadika an'io, na raha tsy izany (ary raha azo atao) ny fomba fametrahana azy nefa tsy mahazo izany lesoka izany (na raha misy olon-kafa ao amin'ny fiarahamonina afaka manampy ahy, tena ho feno fankasitrahana aho ).
Manomboka izao dia misaotra anao aho ary mampamangy anao.
Mamaly an'i Desartare
Tsikaritro fotsiny fa toa tsy mbola manana fonosana ho an'ny Ubuntu 11.10 i Ubuntu Tweak.
Afaka manamarina izany ve ny olon-kafa?
Avelako ny rohy mankany amin'ny pejy ofisialin'ny tetikasa: https://launchpad.net/ubuntu-tweak
Che, mihevitra ilay mpitari-dalana fa manana Internet ny mpampiasa. Saingy eo am-piandohan'ny fametrahana ny rafitra dia tsy manontany tena amin'ny fiteny tianao ianao? Moa ve izany misy fifandraisana Internet, rehefa misafidy fiteny hafa anko amin'ny Anglisy, alaina ireo fonosana fiteny mifanaraka amin'ny safidy. Sa niova tamin'ity kinova ity izany? Raha mijanona toy izao aho dia tsy mahita dikany amin'ny andalan-teny. Na dia tsara aza dia manan-kery ho an'ireo izay tsy nametraka ireo fonosana tamin'ny voalohany, na inona izany na inona.
Oe broder, heveriko fa diso ny sarin'ny Gnome mahazatra ianao, ilay napetrakao dia ny version 11.04, amin'ny 11.10 dia tsy toa izany intsony, ny takelaka dia ... hafa, hoy aho mba hisy olona manandrana azy taty aoriana dia tsy gaga milaza hoe… tsy mety ity na diso aho….
Fiarahabana avy any Nicaragua
Misaotra broder! Raiso an-tsoratra.
Ccantor dia hoy izy:
Misaotra betsaka, mpianatry ny lohahevitra ianao ary ataovy mazava tsara ny hevitra fonosina eto. Mandrosoa mba hahafahan'ny Linux -ubuntu- mahatratra ny rehetra amin'ny fomba tsotra, mivaingana ary MAIMAIM-POANA.
Avy any Kolombia
Mamaly an'i Ccantor
Tsisy olana! Tena tsara fa nanompo anao io.
Diaz-jorge95 dia hoy izy:
E: Tsy afaka nanidy / var / lib / dpkg / hidy - nisokatra (11: Tsy hita vetivety ny loharanom-pahalalana)
Mamaly an'i Diaz-jorge95
Izany dia satria amin'ny fotoana sasany apt (na avy amin'ny terminal na avy amin'ny synaptic) dia mijanona tsy ampoizina. Mety hitranga ihany koa izany rehefa manokatra lamasinina synaptika ianao ary maniry hametraka zavatra avy ao amin'ny terminal ...
Ny vahaolana dia ny mamafa ny fisie lock
Sudo rm / var / lib / dpkg / hidy
Mihobia !! Paul.
Ok, hataoko amin'izay.
Misaotra betsaka amin'ny fiheverana. Fantatro fa hafahafa ny zava-nitranga tamiko, satria tsy nahita na inona na inona tamin'ny internet nitovy taminy aho.
Misaotra hatrany ary arahaba indrindra.
Serodriguezp dia hoy izy:
Manana olana aho, nilaza tamiko ny mpitantana ny fanavaozana fa nohavaozina farany ny rafitra 83 andro lasa izay, omeko azy io, manomboka izy nefa avy eo mandefa ahy ity angano manaraka ity eo amin'ny efijery ary tsy mamela ahy hanavao izany, inona ataoko ve:
"Tsy nahomby tamin'ny fampidinana fampahalalana mitahiry"
Valiny tamin'i Serodriguezp
Salama, lahatsoratra tena tsara, tiako ny bilaogy, novakiako foana ny lahatsoratra rehetra satria hitako fa tena mahaliana sy mahasoa izany, mahazo mailaka avy amin'ireo lahatsoratra aza aho 🙂
Manana fanontaniana aho izao ... Tena vaovao amin'ny Linux aho ary rehefa nanandrana ny Ubuntu 11.04 aho dia tsy maintsy nanova ny mpamily Wi-Fi (USB) izay ny rt2800usb satria niadana be izy io, ary novako ho any amin'ny rt2870sta any ity fomba manaraka ity:
ary avy eo amin'ny lisitra mainty ny rt2800usb.
Ny olana dia ao amin'ity kinova Ubuntu vaovao ity dia tsy hitan'ny rt2870sta izany ary tsy afaka nametraka ny fanavaozana sy mpamily sary ary ny zavatra rehetra avy amin'ny Internet aho. Raha afaka manampy ahy ianao dia tiako be loatra. Ankehitriny dia miaraka amin'ny Linux Mint 11 aho ary miasa ho ahy ny rt2870.
Manantena aho fa ny fanampianao Misaotra!
Sheko QuinteRock dia hoy izy:
matoky aho fa nanana olana mitovy amin'izany, nanavao ny 11.04 aho ary faly, rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka nipoitra ny lesoka, nanadihady kely aho ary ny ankamaroan'ny ankamaroany dia nanoro hevitra ny hametraka avy hatrany am-boalohany, hanazava ny famerenan-javatra ireo zavatra azonao
Tsy noeritreretiko ho fanampiana be izany, saingy eny, nihazakazaka haingana kokoa aho, nanjavona ireo pitsopitsony kely niadiako ary niseho ireo safidy fanampiny.
arahaba avy any Mexico
Mamaly an'i Sheko QuinteRock
Rhodes_adrian dia hoy izy:
Misaotra no fampianarana feno indrindra ho an'ny Ubuntu 11.10, ankafiziko izy io .. !!!
Valiny tamin'i Rodas_adrian
Azo atao ny mampihena ny Ubuntu
Saingy sarotra be izany ary tsy ampoizina ny valiny.
Ny tolo-kevitro: andramo indray ny fametrahana ny kinova farany an'ny Ubuntu (avy amin'ny rangotra, izany hoe, famolavolana ny rafitra). Raha mitohy ny lesoka dia andramo ny mametraka kinova Ubuntu taloha.
Io no vahaolana handany ny kely indrindra sy ny kely indrindra.
Na eo aza izany dia misarika ny saiko ny olanao. Mbola tsy nahare zavatra toa an'ity aho. Fa hey ... misy foana ny voalohany ...
Mbola tsy naheno zavatra mitovy amin'izany aho.
Azonao antoka ve fa foana io fotoana io?
Tsy antony iray hafa ve no mahatonga ny olana?
brenda solis dia hoy izy:
Manana olana aho satria tiako ny manokatra ireo rakitra misy extension .xfig mivantana ao amin'ny nautilus. Tsy miseho tampoka fa misokatra amin'ny programa "Xfig" izy ary raha omeko "misokatra miaraka" ary tsy miseho ilay rindranasa (apetraka). Inona no amporisihinao?
Mamaly an'i brenda solis
Mampiasa XFCE aho izao ary rehefa handeha hisokatra amin'ny ... ankoatry ny lisitry ny programa dia mamela ahy hiditra baiko manokana (izany hoe hitady programa azo tanterahina hafa izay tsy hita ao anaty lisitra).
Amin'ny ankapobeny, ny programa dia ao amin'ny / usr / bin.
Manantena aho fa nanampy ahy.
Salama, Eduardo aho, avy any Espana.
Herinandro lasa izay dia nametraka 11.10 aho ary nanomboka teo dia nanome ahy olana izay nahatonga ahy ho mangidy.
Isaky ny ora, amin'ny 17 ora katroka, dia mandeha irery aho.
Nojereko hatraiza hatraiza nefa tsy nahita vahaolana.
Afaka manampy ahy amin'ity olana ity ve ianao?
Nohomboana tamin'ny 17.
Hatramin'ny nanavaoako ny 11.10 dia nitranga tamiko izany.
Tsy nahita olona tamin'ny Internet aho hanampy ahy amin'ilay olana ary somary kivy aho.
Jereo, hevitra mety angamba ny mahita hoe inona ireo programa manomboka amin'ny fanombohana.
17 lasa foana, na inona na inona ora? Jereo raha manana lahasa voatondro miaraka amin'ny crontab ianao (misy lahatsoratra momba an'io ao amin'ny bilaogy). Mamihina! Paul.
17 taona foana izy io, na inona na inona ora famonoanao azy na famohanao.
Izaho, noho ny tsy fahalalako, dia nanatsoaka hevitra fa io no fotoana havaozina ho 11.10.
Nojereko ny lahatsoratrao tao amin'ny «contrab» fa tsy hitako izay hatao raha te hahita aho raha manana lahasa voatendry aho, satria ny script fotsiny no hitako hampiasana automatique lohahevitra toa ny fanavaozana.
Azonao atao ve ny milaza amiko ny zavatra tsy maintsy ataoko hahitako ireo lahasa voatendry ireo?
Misaotra anao indray tamin'ny sainao.
Raha tsaroako tsara, miaraka amin'ny
Tokony tanisaina ireo lahasa voalahatra (raha misy).
Hafahafa be amiko ny mifandraika amin'ny fotoana fanavaozana Ubuntu. Mbola tsy naheno na namaky olana sahala amin'izany aho (miaraka amin'ny kinova Ubuntu).
Farany, misy foana ny fametrahana hatramin'ny voalohany.
Miaraka amin'ny crontab -l azoko: «tsy misy crontab ho an'i Eduardo»
Ka inona no atoronao ahy mba hataoko? Midika ve ny fametrahana avy eo am-boalohany fa mamolavola sy mametraka indray aho sa afaka mihena amin'ny kinova taloha?
Agustinreta dia hoy izy:
Salama, vaovao amin'ny Ubuntu 11.10 aho ary fanombohana tsara ho ahy ity bilaogy ity. Ny olana tokana ananako dia ny tsy fahafantaran'ny karatra horonantsary ahy. Manana NVIDIA GT 240 aho ary nitady hatraiza hatraiza ny vahaolana ary tsy nahita na inona na inona. Ny olana dia isaky ny avy ary mandeha mainty ny efijery ary miverina amin'ny toerany aorian'ny segondra roa ary izany dia mahasosotra tokoa ny miasa amin'ny solosaina. Raha afaka manampy ahy ianao dia tsara izany. Mangataka anao aho mba ho tena mandinika amin'ny fanazavana satria araka ny nolazaiko dia vaovao amin'ny Linux aho.
PS: Efa nakariko ireo mpamily izay misy ao amin'ny tranokala NVIDIA ofisialy fa tsy azoko apetraka satria milaza fa tsy maintsy miditra ho faka aho fa na dia manao aza aho dia manome lesoka amiko.
Valiny tamin'i Agustinreta
Nanandrana nametraka ireo mpamily tompony tamin'ny fomba "nentim-paharazana" ve ianao? Jereo ity horonantsary ity raha hianaranao ny fomba fanaovana azy: http://www.youtube.com/watch?v=E3GLBYMz7No
Amin'ny teny anglisy fa takatra tsara ...
Eny efa nanao an'izany aho saingy mbola manana ny olana mitovy amiko ihany. Rehefa mandeha amin'ny fampahalalana momba ny rafitra / sary aho, ao amin'ny faritra Controller dia lasa tsy fantatra aho.
Mahazo efijery mainty ve ianao rehefa mametraka ny mpamily tompony na aorian'ny fametrahana an'i Ubuntu fotsiny, amin'ny fampiasana ireo mpamily tonga foana?
Eny, tsy nametraka na inona na inona aho. Heveriko fa izy ireo no tompony. Navoakako tao amin'ny tranokala Nvidia ofisialy ireo fa tsy azoko tanterahina satria milaza amiko fa mandeha mpizara X ary mila manidy azy aho fa tsy afaka. Niezaka tamin'ny fijanonana $ sudo /etc/init.d/gdm aho fa tsy avelako.
OKAY. Ny efijery mainty dia mety noho ny tsy fitoviana eo amin'ny Unity (ny GNOME Shell izay miaraka amin'i Ubuntu) sy ny mpamily anao. Na izany aza, misy ny vahaolana: Unity 2d, izay tsy mampiasa ny vokatry ny Unity 3d fa miafara amin'ny famitana interface tsara ho an'ny mpampiasa farany.
Ny dingana manaraka:
1) Ampidiro ny fonosana firaisan-tsaina 2d
2) Atsangano indray ny masinina na mivoaha ary rehefa miseho ny efijery hampidirana ny anaranao sy ny tenimiafinao, eo amin'ny farany ambany dia azonao atao ny misafidy izay tontolo tianao hampiasaina. Safidiko ny safidy Unity 2d. Manomboka izao, isaky ny miditra ianao, izany no safidy voafidy amin'ny alàlan'ny default. 🙂
Ampahafantaro anay raha mety ho voavaha ny olana. 🙂
The Urogayo dia hoy izy:
Nametraka ny Ubuntu 11.10 aho tamin'ny andro vitsy lasa izay tamin'ny fahafaham-po tanteraka. Tamin'izany fotoana izany dia nanana kapila mafy roa nifandray aho, ny iray amin'izy ireo dia misy fizara telo. Ny rafitra Ubuntu dia nahafantatra ireo toe-javatra ireo tamin'ny fomba tonga lafatra, napetrako izy ireo mba ho afaka manoratra amin'ny "NTFS Configuration Tool" ary milamina ny zava-drehetra.
Roa andro lasa izay dia nesoriko ny kapila mafy ivelany avy amin'ireo fizarana telo ary nampifandraisiko iray hafa miaraka amin'ny fahafaha-lehibe kokoa izay nekena tsy nisy fifanarahana intsony.
Fa izao rehefa manomboka na mamerina amin'ny laoniny ny solosaina aho dia misy hafatra miseho, efa ao amin'ny fanombohana Ubuntu milaza fa hanamarina ny fahamendrehan'ireo kapila ireo ary hanery ny "S" hialana amin'ny fizahana, ary avy eo dia mila ataoko intelo ilay izy anaran'ireo kapila ao anaty kapila ivelany izay tsy mifandray intsony!
Ireo kapila voaresaka dia tsy hita ao amin'ny "NTFS Configuration Tool", noho izany dia heveriko fa vokatry ny fisie fikirakirana sasany izay tsy novaina.
Inona no fisie azo atao ary ahoana ny fanovako azy na ny fanavaozan'ny rafitra azy?
Raha tsy izany dia tena nanampy ahy ity pejy ity ary hitako fa tena tsara ilay tranonkala iray manontolo. Ny arahaba sy fisaorana
Valiny tamin'i El Urogayo
varavarana12 dia hoy izy:
Nanazava tsara ireo dingana ary tamin'ny fomba tena tsotra, tena mety ho an'ny vao manomboka.
Valiny amin'ny varavarana12
DINAMIK dia hoy izy:
Mampalahelo fa tsy tonga miaraka amina sehatra interface i Ubuntu mba hanamboarana Compiz.
talohan'ny nitondrana interface, misy safidy 3 "tsy misy" "fototra" "feno" (na zavatra toa izany) ao anaty bika aman'endriny. mahamenatra
Valio amin'i DINAMIK
Sergio Rodriguez dia hoy izy:
Ahoana no hamahako ny olana, efa toy ny telo volana aho ary tsy afaka manavao an'i Ubuntu
Valiny tamin'i Sergio Rodriguez
Ireo lahatsoratra ireo dia mety hanampy anao amin'izany asa mendrika izany: http://usemoslinux.blogspot.com/2010/08/como-instalar-paquetes-sin-tener-una.html http://usemoslinux.blogspot.com/2010/05/como-instalar-tus-aplicaciones.html http://usemoslinux.blogspot.com/2010/06/como-mantener-actualizadas-varias.html http://usemoslinux.blogspot.com/2010/10/como-restaurar-las-configuraciones-y.html
Mety ho liana amin'ny: http://usemoslinux.blogspot.com/2010/06/multipuesto-como-hacer-que-varias.html
misaotra ny zava-nitranga fa ny manaiky zavatra ary miaraka amin'ny tab ary manome miditra amin'ny fomba mitovy aminy izay ilaina ny miaina ubuntu midina windows
Fє∂єяι ¢ σ Cℓєяι ¢ ι dia hoy izy:
Salama, vao manomboka amin'ny Ubuntu 11.10 aho (mpampiasa Windows aho) ny tena tiako dia tiako, mametraka ny Indikator toy ny (toetr'andro, sensor sensor, ssh, monitors system, dropbox, virtualbox sns aho. .). Notsidihiko izy io fa te-hihazakazaka azy aho tsy fantatro ny fomba hanaovana azy, azonao atao ve ny manampy ahy sa manazava ny fomba hanaovana azy? Misaotra betsaka (Ctrl + D amin'ity pejy ity; =)
Mamaly an'i Fє∂єяι ¢ σ Cℓєяι ¢ ι
martinkbrl dia hoy izy:
Salama! Jereo, apetrako amin'ny tambajotranà milina efa somary antitra any am-pianarana ny Xubuntu ary tsy hitako ny fomba fampidinana fonosana feno hananana amin'ny pendrive ary hametrahana milina fehizoro ubuntu amin'ny masinina, ireo rakitra ao milalaova endrika fananana toy ny mp3 sy flash. Ny tiana holazaina dia hoe azoko atao amin'ny apt-get fa haingana kokoa raha mankany amin'ny masinina iray aho ary avy eo ampitako azy ireo mankany amin'ny hafa. Tiako ny fanampianao. Nivadika ny harato aho ary tsy hitako ny fomba hanaovana azy. Misaotra anao!
PS: Bilaogy tena ilaina ... Arahabaina.
Mamaly an'i martinkbrl
Azo antoka, azonao atao ny misafidy ny misintona ireo fonosam-pitenenana mivantana avy amin'ny installer. Raha tsy mifandray amin'ny Internet ianao amin'izao fotoana izao dia azonao atao ny misintona azy ireo avy eo. Mety hitranga ihany koa, toa ahy, ny tianao hametrahana ny fiteny roa (Anglisy sy Espaniôla).
Cristian Bustos dia hoy izy:
Salama Pablo, mahafinaritra, nanompo ahy be dia be ny bilaogy! Vaovao amin'ny linux aho.
Te hahita aho raha afaka manampy ahy ianao, tsy takatry ny webcam ny fangorahana raha ny marina ary tsy fantatro akory hoe fantatry ny Ubuntu 11.10 izy io, manome ny baiko lsusb izy ary manome ahy an'ity ao amin'ny webcam (Bus 001 Device 002: ID 0c45: 62c0 Microdia Sonix USB 2.0 Camera) Nataoko sary an-tsaina izany ary ho hitako zavatra amin'ny teny Anglisy, ary nantsoin'izy ireo hoe «fromazy» sy «guvcview» fandaharana roa napetrako ny faharoa ary hitan'ny programa ilay webcam ary namboariko, tsy mamela ahy handraikitra horonantsary izany, maka sary fotsiny nefa mbola tsy eken'ny empatiasy izany, hiezaka ny programa hafa aho raha hahomby raha 100% izany, dia holazaiko aminao.
Raha nanana vahaolana hafa na zavatra hatao ianao dia apetraho ireo mpamily cam.
Mialoha izany dia misaotra betsaka…
Valiny tamin'i Cristian Bustos
Pvv dia hoy izy:
Namana Manana ubuntu 11.10 aho ary tsy afaka nametraka rakitra .bin, afaka manampy ahy ve ianao?
Mamaly an'i JcV
eddy_tk25 dia hoy izy:
fa raha saika mitovy baina miaraka amin'ny kinova 11.04
Mamaly an'i eddy_tk25
Puppy Linux 5.3 "Slacko" dia miorina amin'ny Slackware 13.37